Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Cusboonaysiinta ugu dambeysay February 2, 2019
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska "Gladiator". Salomon Rondon Childhood Story Story iyo Weedhi Wacan Xaqiiqo ahaan adiga oo ah xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo ka socda wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskeeda, sheekada nolosha ka hor caan, sheekada sumcadda, xiriirka iyo nolosha qofka iwm.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay qof awood u leh inuu aqbalo ama u dulqaato dib u dhacyada mustaqbalka, isagoo ka dhigaya mid ka mid ah weeraryahanada ugu badan ee horyaalka horyaalka Premier League mar uun helay. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah waxay tixgeliyaan Salomon Rondon's Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Taariikhda Hore iyo Qoyska
José Salomón Rondón Giménez wuxuu ku dhashay maalinta 16th ee September 1989 hooyadiis, Maitana Giménez oo ah hooyo, aabe, José Rafael Rondón (macalin kiimiko) oo ka tirsan qaybta dadka ee Catia, ee Caracas, Venezuela. Hoos waxaa ku qoran sawirka waalidiinta Salomon Rondon.
Salomon Rondon Waalidiinta - MOTHER- Maitana Giménez iyo FATHER-José Rafael Rondón IG)
Salomon Rondon dhalashadiisa ayaa loo qoondeeyey sida aabbihiis oo mar hore siiyay sheeko uu ku qoray sheekadii hore ee wiilkiisa.
"Xaaskeyga, markii ay uur lahayd waxay qabatay caloosha aad u weyn. Sidoo kale wakhtigaas, walaashey-walaasheed waxay ahayd wax la yaab leh Diego Maradona sababtoo ah Koobka Adduunka 1986. Waxaa soo baxday in mar kasta oo aan arkeyno ciyaarta halkaa Maradona ciyaaray, ilmaha Sulaymaan wuxuu ujoogi lahaa in ka badan ilmo hooyadiis. Sidaa daraadeed walaashey ayaa sheegtay in wiilkayga aan dhalan uu noqon lahaa ciyaaryahan kubadda cagta ah, iyaduna way saxan tahay. José Rafael Rondón ayaa dib u soo yeeray.
Rondon ugu dambeyntii wuxuu ku dhashay wiilkiisii ​​labaad ee waalidkiis ee qoyskiisii ​​qoyskiisa. Waxa uu ku soo koray walaalihiis, Gerardo oo seddex sano jir ah iyo walaalkiis Ismaaciil oo ah wiilkiisa 3 sano jirkiisa.
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Hawlaha Hore
Salomon Rondon wuxuu bilaabay inuu mustaqbalkiisa hore uqaado sida socodka, haraatida iyo hurdada isagoo kubad hurda habeen kasta. Waxa uu ahaa ka qaybqaadashada kubada cagta ee isaga ka xayiray xulashooyinka liita ee uu sameyn lahaa ilmo ahaan.
"Tan iyo markii aan dhashay waxaan marwalba socdaa kubad iyo wax walba oo aan leyno. Afar sano kadib waxaan bilaabay inaan ciyaaro dugsigeyga. "
Markuu ahaa da'da qandaraaska ee 4, Rondon wuxuu aqbalay sanamyadiisa inuu noqdo Rivaldo iyo Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Go'aanka lagu ciyaaro kubada cagta ee dugsiga ayaa yimid hal maalin markii macalinka Rondon uu soo jeediyay taladiisa hooyadiis, Maitana inuu u ogolaado wiilkiisa inuu kubadda ku ciyaaro maxkamadaha wasakheysan ee dugsiga. Waxay aqbashay, Rondon waxay bilaabatay kubbadda kubadda cagta dugsiga inta lagu jiro maalintii. Guulihiisii ​​ugu horeeyay ee isboortiga ayaa yimid markii uu ciyaaray tartamadii tartanka ee dugsiga halkaas oo uu ku guuleystay koobkiisii ​​ugu horeeyay.
Rondon First Sporting Success-Amaahda kooxdaGulima
Xitaa ka dib markii uu ka soo laabtay dugsiga, kubada cagta ayaa weli ah daruuri. Tani waxay ka dhigtay inuu isku qoro kooxdiisii ​​hore ee San José de Calasanz taasoo fursad u siisay inuu ciyaaro kubadda cagta habeenkii. Rondon wuxuu kubada cagta u isticmaalay waxqabadyo dhammaystiran oo ku saabsan daraasaddaha, kuwaas oo had iyo jeer hoos u dhacay kormeerka waalidkiis oo sameeyay caado ka mid ah sawirada sawirada ee sawiradii hore ee kubada cagta ee wiilkooda.
Salomon Rondon ayaa aabihiisa u muujiyay noloshiisa hore ee mustaqbalka wiilkiisa ee loo yaqaan 'album-Credit' Cronica.
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Waddada Weyn
Salomon Rondon ayaa xittaa dareemay dareen kubada cagta ah, mararka qaar si xun ayuu ugu jiraa gurigiisa. Tani waxay ahayd waqtigii Rondon iyo walaalkiis Gerardo uu jeclaa inuu jabiyo daaqada guriga, gumeysiga iyo daaraha.
Salomon Rondon ayaa jabiyay daaqadiisii ​​gurigiisa isaga oo kubada kubadda cagta u ahaa Kid (Credit to PixaBay)
Qaadashada waalidkiis oo aad u culus ayaa u horseeday hooyadiis inay u sheegto Rondon inuu bixin lahaa muraayadaha marka uu bilaabo inuu helo kubad xirfadle ah.
Samaynta Go'aanka Weyn:
Rondon wuxuu sameeyey go'aanka ugu weyn markii uu ku jiray sanadka labaad ee dugsiga sare ee Calasanz. Waxa uu wajahaya aabihiis Rafael si uu u yeesho waxa uu u tixgeliyey hadal aad u culus oo macallinka kiimikada.
"Wuxuu ii sheegay inuu ka tagayo dugsiga si uu u ciyaaro kubada cagta," Aabihiis wuu soo xasuustay.
Salomon Rondon ugu danbeyntii wuxuu sameeyay go'aan aan la bedeli karin oo uu ka tagayo waxbarashada jaamacaddiisa isla markaana naftiisa gebi ahaanba kubadda cagta u qaaday. Go'aankan ayaa waxaa soo raacay isaga oo isku qoraya liiska kooxda maxalliga ah ee Deportivo Gulima ka dib markii tijaabo lagu guuleystay.
Salomon Rondon Deportivo Kaarka Aqoonsiga Gulimi (Credit to ClubGulima)
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Kusoo caan bax
Iyadoo Deportivo Gulima, Salomon Rondon uu indhihiisa ku arkay Europe. Si uu u raaco, wuxuu go'aansaday inuu sii wado geeddisocodkiisa horumarinta kubada cagta ee Aragua, oo ah Columbia oo leh sumcad si loogu ciyaaro Yurub. Rondon ayaa saameyn degdeg ah ku yeeshay Aragua isagoo noqday mawduuca ugu weyn ee warbaahinta kooxda.
Salomon Rondon Waddada Cambaareynta (Abaalmarinta CumpleañosdeFamosos)
Guushii joogtada aheyd ayaa ku soo biiray kooxda weyn ee kooxda sanad ka dib markii uu ku biiray kooxdooda dhalinyarada. Rondon da'da 17 ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday horyaalka Venezuela Primera División. Waqti ma uusan qaadin ka hor inta uusan ku dhicin inuu yahay weeraryahankii ugu fiicnaa dalkiisa.
Salomon Rondon's Success Story with Aragua (Lacagta AS)
Sanadkaas 2008, Rondon waxa uu ku riyoodaa in uu Yurub ka ciyaaro xaqiiqda ka dib markii uu ku dhajiyay UD Las Palmas gudaha Spain. Isagoo ka hadlayay xaalada maskaxeed ee ka baxaya guriga, Rondon mar ayaa yiri ...
"Qoyskeyga oo aan tago Europe waa wax ugu adag. Hooyadii hooyaday ee igu dhacday waa 'Go!' Hooyaday ayaa oohinaysay markii ay tiri. Aniguna waan qayliyay. Waxaan ahaa 19 wakhtigaas. Waxba kama ogin - Ma aanan ogeyn sida loo karsado ... Waxaan had iyo jeer ku lahaa Skype, "Hooyo, sidee baan u kariyaa baastada?" Awowgaygu wuxuu u egyahay, 'Biyaha saar digsiga iyo ...' '
Yurub, Rondon wuxuu kordhay isla markaana uu helay isaga oo u ciyaara Malaga. Ma uusan qaadin waqti dheer si uu kooxda ula qabsado. Ma ogeyd?… Iyadoo Malaga, Rondon oo qaangaar ah oo soo kordhay mashiinka gooldhalinta Ruud van Nistelrooy isaga oo jah wareersan kadibna ku qasbey inuu hawlgab noqdo.
Salomon Rondon ayaa ku guuleystey abaalmarinta (Credit to TalkSports iyo 20Minutos)
Salomon Rondon ayaa sii waday inuu noqdo geesinimo tan iyo markii uu shaqada ka fadhiistay Ruud van Nistelrooy. Waad ku mahadsantihiin qaab ciyaareedkiisa, wuxuu ka sare maray rikoorka goolasha LaLiga ee uu dhaliyey ciyaaryahankii hore ee reer Venezuela Juan Arango. "Badbaadiyaha Malaga"Waxaa loo yeeray inuu naftiisa ku caawiyay kooxda Spanishka ah ee ka baxsan inay ka baxsadaan.
Salomon Rondon wuxuu noqonayaa Badbaadiyaha Malaga Instagram)
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Nolosha Xiriirka
Salomon Rondon waa mid ka soo baxa isha lagu hayo indhaha dadweynaha sababtoo ah noloshiisa jacaylku waa mid aan riwaayad lahayn. Marka laga hadlo Venezuela guuleysta, waxaa jira xaas leh xagjirnimo iyo caruur qurux badan.
Salomon Rondon xaaskiisa iyo caruurtiisii ​​(Credit) Salomon Rondon Instagram)
Salomon Rondon oo ah waqtigii wax lagu qori jiray Newcastle oo uu aaminsan yahay "magaalo weyn"Qoyskiisa. "Xaaskeyga, labadayda caruur ah, hooyo sodon ah, awoowayga xaaskeyga, waxaan haystaa qoyskeyga igu wareegsan" ayaa sheegay in Rondón,
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaato nolosha Salomon Rondon noloshiisa gaarka ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah. Bilaabidda, isagu waa qof leh qaab hab-nololeed oo hubiya in uu go'aamiyo in uu raadsado farxad ka sareysa wax walba.
Salomon Rondon oo ka mid ah goolasha goolasha ee garoonka, Salomon Rondon ayaa waqti dheer ku riyaaqaya ciyaaraha boodhka oo uu aaminsan yahay inuu kordhinayo xoogiisa jirka. Hoos waxaa ku qoran fiidiyowga waxqabadka noocaas ah.
Rondon waxay aaminsan tahay in sanduuq lagu ciyaaro sida ciyaaraha isboortiga. Fiidiyowga hoos ku xusan, wuxuu awood u leeyahay in uu si wanaagsan ugu isticmaalo isagoo baraya caruurtiisa sida loo difaacayo naftiisa iyo waligoodna u isticmaalin cayaaraha si ay u raadiyaan dhibaatooyin.
Rondon wuxuu ka soo jeeda St James 'Park, isagoo la ciyaaraya caruurtiisa iyo feerka, Rondon wuxuu ku faraxsan yahay inuu la socdo eeyga.
Salomon Rondon iyo Ehelkiisa (Credit to The Mirror).
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Nolosha Qoyska
In uu noqdo ciyaaryahankii caanka ahaa ee ugu caansanaa kubadda cagta iyo hal-ku-xigeenka Premier League, wuxuu hubaal ka dhigayaa qoyska Salomon Rondon iyo dhammaan waddanka uu ku faani karo isaga. Salomon Rondon waalidiintiisa iyo walaalaha waxay joogaan Caracas, Venezuela taas oo wakhtiga qorista. Tani waa waddan siyaasad ahaan aan degganeyn sababtoo ah waa dhibaatooyin dhaqaale iyo siyaasadeed oo dheer.
Salomon Rondon's Country in Turmoil (Credit to NBC News iyo Khilafah)
Iyadoo sicir-bararka ka soo baxaayo xakamaynta, dambiyada qalalaasuhu waa kuwo isdaba-joog ah iyo heerka dilka uu cabsi-galinayo Venezuela. Isagoo ka hadlaya khatarta afduubayaasha, Rondon mar ayaa yiri;
"Dad aad u tiro yar ayaa ogyahay ciddii qoyskeyga joogtana waxaan isku dayaa inta ugu badan ee suurtagal ah inaysan aniga ila arkin - ma ahan dhammaan Venezuela. Haddii aan la joogo, had iyo jeer waa guriga qoyska. Marnaba iskuma soo baxno si aynaan u fiirsan. Waxaan isku dayayaa inaanan wax dareen ah isa soo taagin markaan imid. "
Inkasta oo ay jirto arrimo amniga ah, Rondon maaha mid xishood ah inuu sawirro la qaato waalidiintiisa gaar ahaan aabihiis jacaylka ah oo ka soo noqday macalin kiimikada kadib markii uu noqday borofisar kimiste oo ka mid ah dugsiyada militariga ee Venezuela.
Salomon Rondon oo ku nasanaya aabihiis (Credit to Instagram)
Salomon Rondon Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Ku saabsan heeshiisa Gladiator Nickname:
Sida laga soo xigtay MirrorSalomon Rondon mar uu soo bandhigay wuxuu jecel yahay in lagu magacaabo naaneyska uu ... "bahalkii"Intii uu joogay Malaga. Markii uu ku biiray Newcastle, taageerayaasha ayaa bilaabay inuu ku magacaabo "Gladiator"Taas oo ah magac uu jecel yahay ugu badan.
"Waan jeclahay naaneeyska 'Gladiator'. Tani waa waxa aan isku dayayo inaan garoonka ku jiro. Waxaan furay gacmaheyga, ii muuqaal weyn, jirkeeyga jidka ku jiraa, waxaanan isku dayaa inaan kubadda u xakameeyo kooxdayda. "
Ka dib markii lagu soo rogay fiidiyaha Xirfadaha Gladiator, Rondon ayaa go'aansaday inuu taageerayaashiisa ku tartamo abaalmarin adoo codsanaya inay soo diraan fiidiyowgooda ugu wanaagsan iyo khibradahooda shay kasta oo aan ahayn ⚽ isticmaalka hashtag #GladiatorSkillz #Gladiador # Gladiator. Hoos waxaa ku yaal Salomon Rondon Gladiator Video.
Hantida FACT: Waad mahadsantihiin akhrinta Salomon Rondon Childhood Story plus iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.